Tetikasa Ho Famelomana Indray Ny Teny Potón sy Pisbi ao Salvadora · Global Voices teny Malagasy
Tetikasa Ho Famelomana Indray Ny Teny Potón sy Pisbi ao Salvadora
Nandika (fr) i Eugénie Clément Picos
Voadika ny 23 Janoary 2017 16:03 GMT
Ity no lahatsoratra tatitra voalohany amin'ny tetikasanay nahazo ny famatsiambola madiniky ny Rising Voices ho fanohanana ireo fandraisana andraikitra amin'ny fikatrohana niomerika ho an'ireo tenin'ny vazimba teratany. Hanoratra lahatsoratra momba ny fandroson'ny tetikasany ireo mpisitraka izany.
Ny 26 Febroary 2016, nanomboka dingana iray tsy mbola nisy toa azy ho famelomana indray ny teny potón sy pisbi ao Salvadora ny Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (Filankevitra Fandrindràna Nasionalin'ireo Vazimba Teratany ao Salvadora, CNIS), tanjona amin'izany ny hampahafantatra sy hampiroborobo ny maha-izy azy ireo vahoaka Lenca sy Kakawira amin'ny alàlan'ny tenin-dry zareo. Marobe ireo tanora avy amin'ny vahoaka vazimba teratany no mandray anjara amin'ilay tetikasa izay vatsian'ny Rising Voices vola : tsy maintsy manangana loharano niomerika ho entina mampahafantatra sy mampiroborobo ireo fiteny eny anivon'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika hatry ny fahagola ry zareo. Nomena ireo mpandray anjara ny fitaovana teknolojika ahafahany mamadika ho amin'ny endrika niomerika ireo taratasy entina mampianatra ireo fiteny ireo. Hahazo fiofanana ihany koa ry zareo momba ny tetikady amin'ny fampitàna hafatry ny vazimba teratany sy ireo rindrambaiko fanontàna, izay ahafahan-dry zareo manohy ny fitahirizana, ny fanamafisana ary ny famelomana indray ny tenindrenin-dry zareo.
Heverin'ny CNIS fa miaraka amin'ny fanjavonan'ny teny tsy voasoratra na tsy voarakitra, dia tsy hoe fotsiny ho very harena goavana ara-kolontsaina ny zanak'olombelona, fa koa ireo fahalalàna nentin-drazana izay mifono indrindra indrindra any anatin'ireo fitenin'ny vazimba teratany. Ny fitahirizana azy ireny dia hahafahana miatrika fanamby vaovao amin'ny fitompoana ny teknolojia. Isika, vazimba teratany, tsy maintsy mametraka tetikady hanamafisana sy hanapariahana ny fomban-kolontsaina fanaontsika sy ireo dingana ara-tsosialy ary ara-piarahamonintsika, no sady mandray ho anaty kajikajy ny zavamisy hoe sarotra ny fahafahana mahita fahitalavitra,ny fandrafetana sy ny fanontàna ireo votoatinà haino aman-jery ho an'ireo vondrom-piarahamonina vazimba teratany, ary vokatr'izay dia tsy mitovy.
Ny fanekena ny zavamisy iainan'ireo vazimba teratany ary ny tosika ara-kolontsaina sy ara-paritra dia maneho hery anaty lehibe ananan'ny firenena. Io zavatra azo atao io no hamerina hamaritra ireo votoaty izay hidiran'ny fiarahamonina salvadoriana manontolo, saingy tsy maintsy atao ny tsy hanilikilihana ireo “vazimba teratany” ao anatin'io ka tsy ho lasa toy ny endrika fotsiny hitadiavana vola, fa amin'ny fanajàna ny zony amin'ilay famaritany ny tenany manokana. Araka izany isika, vahoaka vazimba teratany, dia ho afaka ny hamolavola ireo votoaty antsika manokana, mamokatra azy ireny sy manely azy manaraka fepetra isian'ny fitoviana.
Ny toko faha- 62 ao amin'ny lalam-panorenan'ny Repoblikan'i Salvadora manambara hoe : “Tafiditra ho isan'ny harem-bakoky ny firenena ireo fiteny teratany tenenina manerana ny faritry ny firenena ka tsy maintsy arovana, aparitaka ary hajaina.” Kanefa, ireo ezaka eny anivon'ny andrim-panjakana izay mifantoka betsaka amin'ny filàna ny fiteny nahuat an'ireo vazimba teratany Náhua Pipil dia nanilika ho any amin'ny toerana faharoa ny fitenin'ny Lenca (potón) sy ny Kakawira (pisbi).
Hazavain'i Betty Pérez, mpandrindra nasionaly ny CCNIS :
A pesar de contar con documentación de cada uno de los Idiomas en formato de cartillas de aprendizaje, creemos que transformarlas en formato de audio digital pueda fortalecer la identidad cultural de estos Pueblos, en un contexto de procesos de reivindicación de Derechos propios, más aún, cuando se ha realizado una reforma a la constitución de la república donde se reconoce que en el país existen Pueblos Indígenas en su Artículo 63, hasta el pasado 12 de junio de 2014.
Na ananany eo am-pelatanany aza ireo antontan-kevitra momba ireo teny tsirairay, amin'ny endrika boky kely fianarana, inoanay fa ny famadihana azy ho amin'ny endrika feo niomerika dia mety ho afaka hanamafy ny maha-izy azy ara-kolontsaina ireny vahoaka ireny, indrindra indrindra ao anaty vanim-potoana fitakiany ny zon'izy ireo. Fanampin'izay, ny toko faha-63 amin'ny fanitsiana ny lalàm-panorenan'ny Repoblika tamin'ny 12 Jona 2014 dia manaiky ny fisian'ireny vahoaka vazimba teratany ireny ato anatin'ity firenena ity.
Araka ny voalazan'ny Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fanabezana, ny Siansa ary ny Kolontsaina (UNESCO), vinavinaina ho ny antsasak'ireo fiteny enina arivo tenenina erantany no hanjavona amin'ny faran'ity taonjato ity. Na eo amin'ny 17% eo aza no vinavinaina ho vazimba teratany amin'ireo mponina ao Salvadora, tsy misy ao amin'ilay firenena ny politikam-panjakana natao hanamafy ny maha-izy azy ara-kolontsaina, ny fiteny ary ny fanajàna ny zon'ireo vondrom-piarahamonin'ny vazimba teratany manerana ny firenena.
Ny 15 Novambra 1992 no naorina ny CCNIS, ho toy ny rantsana iray mampivondrona fikambanana vazimba teratany Lenca sy Nahua Pipil miisa telo ambiroapolo manerana ny firenena. Miasa mitaky ny zon'ireo vazimba teratany ary ny fanamafisana ny tambatselam-piarahamonina izy io. Ary mpikambana mpanorina ihany koa ny Filankevitr'ireo vazimba teratany ao Amerika Afovoany (Consejo Indígena de Centro América), CICA.